Maalinta: Diseembar 25, 2017
Turkey Aqbaarta Association (TBD) by 20-21 qabtay Ankara dhexeeya taariikhaha December 2017 34. Abaalmarinta Adeegga 2017 waxaa lagu bixiyay Khadka Macluumaadka Qaranka. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Binali YILDIRIM, Wasiirka Horumarinta ee Jamhuuriyadda Turkiga [More ...]
Kuuriyu waxay la socotaa tareenada LTE-R
Kuuriyada Woqooyi waxay xoojineysaa kaabayaasheeda tikniyoolajiyadeed ee Xilliga Xagaaga ee Xilliga Xilliga Xilli Ciyaaraha, kaas oo ay martigelin doonto. 2018 - 9 Soo booqdayaal fara badan ayaa dalka u soo qulquli doona Ciyaaraha Olombikada ee Febraayo. Tirada dadka isticmaala [More ...]
Ma jiraan wax shaqaale TCDD ah oo ku jira qorshaha shicibka?
Iyadoo Sharciga Sharciga ee No. 696 la daabacay shalay, shaqaalaha qandaraas-qaata ayaa la shaqaaleeyay. Shaqaalaha qandaraaska ah ee ka shaqeeya hay'adda 59, oo ay ku jiraan TCDD iyo TCDD Taşımacılık A.Ş., ayaa laga saaray shaqaalaha. [More ...]
Aydin Cimilada Xawaaraha Sare
Tareenka Gobolka TCDD 3. Agaasinka Gobolka ee 'Aydın-Denizli inta u dhaxaysa 2. Mashruuca Jid-tareenka waxaa ansixiyay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta iyada oo la adeegsanayo 'Qiyaasta Saamaynta Deegaanka' (EIA). 824 milyan ginni oo uu la socdo mashruuca Aydın-Denizli [More ...]
Waxyaabaha la ilaaway ee basaska İETT 15 Janawari 2018 waxaa lagu iibin doonaa iibka dhismaha Saldhigga Karaköy Isniinta. Basaska IETT, joogsiyada, gawaarida metrobus iyo saldhigyada ayaa la iloobey oo la gaarsiiyay mas'uuliyiinta [More ...]
Xeerka shaqaalaha Agaasinka Guud ee TÜVASAŞ waxaa lagu soo saaray Gazette Rasmiga ah. Sida ku xusan, Gazette rasmiga ah ee qaanuunka imtixaanada ee Gudbinta iyo Bedelka Cinwaanka ayaa lagu sheegay. maanta Turkey ee tirada faafinta rasmiga baabuur Industry Agaasinka Guud [More ...]
In arrinta maanta ee faafinta rasmiga ah ee shaqaalaha Republic of Turkey State Tareennada (TCDD) Gudbinta iyo Change of xeerarka Title Imtixaanka waxaa la daabacay. Waxaa lagu daabacay Gazette Rasmiga ah ee rasmiga ah ee Gazette 25 Diseembar 2017 ee ku taariikhaysan taariikhda shaqaalaha TCDD [More ...]
Injineerada Turkiga ee Samsun waxay soo saaraan dareeraha xawaaraha taraamka
Injineerada Turkiga ah ee Samsun, 850 Euro qiimaha ayaa ugu wacan cilad ku timid dareeraha xawaaraha ee laga helay taraamyada ay isticmaalaan Samsun Light Rail System Inc. (SAMULAŞ) iyo shirkadda Monoly-ga ee Jarmalka. [More ...]
Adeegga gawaarida ee rikoodhka laga furay Jarmalka
Gaariga fiilada, oo laga sameeyay buuraha ugu sarreeya Jarmalka, Zugspitze oo leh tayo ka duwan kuwa ay isku fac yihiin adduunka oo leh astaamo farsamo, ayaa la geliyay. Dhismaha sanadka ee 3 ka dib dhicitaanka gaariga fiilada, booqdayaasha 2 kun ee 962 mitir [More ...]
Xisaabinta waxaa laga bilaabay Kanal Istanbul
Tirinta codadka ayaa loo bilaabay Mashruuca Kanal İstanbul, oo uu ku tilmaamay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan "riyadeyda". Laga soo bilaabo suurtagalnimada in la beddelo dariiqa mashruuca illaa saameynta deegaanka, arrimaha la xiriira mowduucyo badan ayaa la keenay ajendaha Golaha. Wasiirka Gaadiidka [More ...]
Waqtiga Socdaalka Safarka Kaarka Amaahda ee Gaadiidka Gaziantep
Marka la eego baaxadda Nidaamka Kaarka Gaziantep ee ay hirgelisay Gaziantep Magaalo-weyne, waxaa socdaa bilaabidda safarka kaarka amaahda ee aan lala xiriirin. Marka la eego baaxadda “Mashruuca Gaadiidka Dadweynaha ee Mastercard-Gaziantep ılan waxaa bilaabay Gaziantep Magaalo-weynaha Magaalaweynta iyo Mastercard, [More ...]
2017 by Kocaeli Metropolitan Dowlada Hoose Bishii Agoosto, khadka tareenka Akmaray 2. Shaqada marxaladda ayaa si isdaba joog ah u socota. Xoghayaha Guud ee dadweynaha wuxuu shirweynihii Oktoobar ee Golaha Dawlada Hoose [More ...]
RayHaber 25.12.2017 Warbixinta Shirka
Soo iibsiga adeegyada dhakhaatiirta shaqooyinka Shaqaalaha adeegga waxaa la iibsan doonaa Amniga iyo nidaamka la socoshada ayaa la iibsan doonaa
İZDENİZ A.Ş. waxay cusbooneysiisay maraakiibteeda maraakiibta casriga ah waxayna heshay "calaamado sare" sahaminta raali ahaanta ee laga qaaday rakaabka. Boqolkiiba 83 kuwa la wareystay ee Jaamacadda Dokuz Eylül waxay ku qanacsan yihiin tayada adeegga ee Dowladda Hoose ee Magaalada Caabudwaaq. [More ...]